RN44 : Manomboka ny asa fanamboaran-dalana -
AccueilSongandinaRN44 : Manomboka ny asa fanamboaran-dalana
RN44 : Manomboka ny asa fanamboaran-dalana
Araka ny toromariky ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery amin’ny hanohizana hatrany ny ezaka eo amin’ny asa fanamboaran-dalana dia fantatra amin’izao fotoana izao fa efa manomboka ny asa fanamboarana iny lalam-pirenena Rn44 iny, taorian’ny fahasimbana navelan’ny rivodoza Eliakim. Efa any an-toerana avokoa amin’izao fotoana izao ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana, ary efa amperinasa tanteraka ny minisiteran’ny Asa vaventy, araka ny fampitam-baovao amin’ity farany. Lalana mirefy 2,5 km no voakasiky ny fanamboarana, izay eo anelanelan’ny Pk 86+100 hatreny amin’ny Pk 88+000. Hisy amin’ny ampahan-dalana no hatao tara araka ny loharanom-baovao , ka hampiasa akora toa ny Zydex ny ministera mba hanamafisana ny tanjaky ny lalana sy hiarovana amin’ny fahasimbana matetika. Ao anatin’ny fiarovana ny lalana izay hatrany, hisy ny fanamboarana lakan-drano.
Tafiditra ao anatin’ny fiarovana ny lalana mba hialana amin’ny fahasimbana vetivety, fantatra hisy fiaran’ny minisitera hanara-maso ny vesatry ny fiara. “Efa tonga eny amin’iny lalam-pirenena iny ihany koa ireo fiaran’ny minisitera mpanara-maso ny vesatry ny fiara izay fantatra fa anisan’ny fototry ny fahasimban’ny lalana haingana eny amin’ireny lalam-pirenena ireny. Asa fanentanana aloha hatreto no sahanin’izy ireo, fa ao aorian’izay dia ampiharina amin’ireo tsy manara-dalàna ny sazy ho an’ny fihoarana amin’ny lanja izay tokony ho izy izay”, araka ny fanambarany minisiteran’ny Asa vaventy. Manoloana izao fanamboarana ny Rn44 izao moa dia velombolo sy mankasitraka sahady ny asa izay tanterahin’ny fitondram-panjakana ireo mponina eny an-toerana mahita ny fanombohan’ny asa, satria fahoriana no iainan’ireo mponina mampiasa iny lalana iny, indrindra amin’ny famoahana ny vokatra.
Tonga nitsidika ny lapam-panjakana Iavoloha ireo mpianatra miisa 97 amin’ny kilasy voalohany amin’ny sokajy L sy S avy amin’ny lisea tsy miankina katolika Conception ao Morondava, niaraka tamin’ireo mpanabe azy ireo omaly 4 aprily. Fotoana ...Tohiny